Mbugharị Igwefoto Igwefoto
Ultra Long Range Mbugharị
Igwefoto Igwefoto Dijitalụ
Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe
1024 * 768 Module Igwe
640 * 512 Igwe Igwe Igwe
384 * 288 Igwe Igwe Igwe
EO / IR Igwefoto Igwefoto
Igwefoto PTZ Dome
Cameragbọ ala PTZ Igwefoto
Nnukwu ibu PTZ Igwefoto
Gimbal na-ahụ anya
Igwefoto akwadoro SG-ZCM2030DL iji dochie SONY Igwefoto
Anyị nwere ụdị modulu mbugharị igwefoto dị iche iche, gụnyere igwefoto mbugharị igwefoto na igwefoto mbugharị dijitalụ (LVDS), dị ka anyị si mara, ọtụtụ ụdị SONY akwụsịla ugbu a, ọtụtụ ndị ahịa jiri igwefoto mbugharị 30x SG-ZCM2030DL iji dochie igwefoto SONY FCB-EV7520 na FCB-EV7520A, ma nwee ezigbo arụmọrụ ....
New wepụtara OIS Igwefoto
Anyị ka rụpụtara igwefoto ọhụrụ na Dec, 2020: 2Megapixel 58x Ogologo Ogologo Ntinye Nweta OIS Igwefoto Module SG-ZCM2058N-O High Light Features: 1.OIS atụmatụ OIS (Optical image stabilization) pụtara nweta ndozi onyonyo site na ntọala nke ngwa anya. , dị ka oghere ngwaike, na ...
Gịnị bụ igwefoto Defog?
Igwefoto dị nso dị ogologo oge nwere atụmatụ defog, gụnyere igwefoto PTZ, igwefoto EO / IR, nke a na-eji agbachitere na ndị agha, iji hụ dịka o kwere mee. E nwere ụzọ abụọ dị iche iche nke teknụzụ ịbanye igwe: 1.Optical defog igwefoto Igwe ọhụụ na-ahụkarị enweghị ike ịbanye n'ime igwe ojii na anwụrụ ọkụ, mana nso-na ...
Ngwa anya defog na Savgood Network modul
Igwe ele onyunyo arụnyere na mpụga ga-eguzo ule nke 24/7 ọrụ site na ìhè siri ike, mmiri ozuzo, snow, na foogu. Ihe ikuku aerosol di na igwe nke juputara na nsogbu, ma burukwa otu n’ime ihe ndi n’emebi nkpuru oyiyi ihere. Weather nke ukwuu affe ...
Igwefoto mkpuchi infrared na ogologo dị ogologo maka igwefoto nchekwa
Ichebe oke mba dị oke mkpa maka nchekwa obodo. Otú ọ dị, ịchọpụta ndị nwere ike ịbụ ndị omekome ma ọ bụ ndị ahịa nzuzo na ihu igwe na-enweghị atụ na gburugburu gbara ọchịchịrị bụ ezigbo ihe ịma aka. Mana eserese eserese eserese nke infrared nwere ike inye aka gboo mkpa nchọpụta na l ...
Savgood tọhapụrụ igwefoto Zoom Block nke ụwa nwere ogologo karịa 800mm ọkwọ ụgbọ ala Auto Foucs Lens.
Imirikiti nke Ogologo Ogologo oge na-emezi ihe na-eji igwefoto igwe na igwe eji agba agba, na mgbakwunye ihe mgbakwunye, maka ihe ngwọta a, enwere ọtụtụ adịghị ike, arụmọrụ dị ala Nchekwa onwe, ga-atụfu uche mgbe ogologo oge na-arụ ọrụ, ihe ngwọta niile dị arọ igwefoto na al ...
Nke 406 Xintiandi Street, Hangzhou City, China
Copyright - 2013-2020: All Rights echekwabara.